Kooxood Ee Ugu Koobabka Badan Adduunka Oo La Shaaciyey- Afrika ayaa 1aad Noqotay %
By Ramzi Yare	 On Jun 7, 2020
Shanta kaalmood ee ugu horreeya soddonka kooxood ee ugu koobabka badan adduunka ayaa laga waayey naadiyada waaweyn ee Yurub, waxaanay iskugu urureen meelo dhexe iyadoo ay kooxo lama filaan ahi ka koobab bateen.
Qof walba waxa uu ka fikiri karayaa in naadiyada sida Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Manchester United iyo Juventus ay ka mid yihiin kooxaha tirada ugu badan ee koobabka ah kusoo guuleystay intii ay jireen, laakiin xaqiiqadu way ka beddelan tahay sidaas, waxaana guulaha ugu badan
ay u diiwaangashan yihiin kooxo aan maskaxdaada kusoo dhacaynin.
Wargeyska Four Four Two ee kasoo baxa UK ayaa soo bandhigay xogta kooxaha dunida ugu guulaha badan, waxaana shanta kaalmood ee ugu horreeya ka maqan kooxaha waaweyn ee Yurub.
Sida xogtani muujinayso, Barcelona oo kaalinta lixaad ee liiska kooxaha ugu guulaha badan ku jirta ayaa noqotay naadiga weyn ee ugu soo sarreeya kooxaha awooda badan ee Yurub dhinaca guulaha koobabka.
Kooxda reer Masar ee Al Ahly ayaa noqotay naadiga dunida ugu guulaha badan dhinaca koobabka, waxaanay horyaalka dalkaas hantiday 41 jeer iyadoo 12 koob ka horreysa kooxda kusoo xigta dhinaca koobabka.
Al Ahly oo sannadkii hore ku guuleysatay Champions League-ga qaaradda Afrika, ayaa siddeed jeer noqotay horyaalka Afrika, waana kooxda ugu guulaha badan maadaama aanay jirin koox kale oo qaaradda ah oo intaas in le’eg ku guuleysata.
Tirada koobabka ay haysato Al Ahlay ayaa ah 118 koob, waxaana kusoo xigta kooxda reer Scotland ee Rangers oo 115 koob ku guuleysatay intii ay jirtay, halka kaalinta saddexaadna ay soo gashay kooxda reer Uruguay ee Nacional oo 113 koob qaadatay.
Penarol oo Uruguay oo 108 koob haysata ayaa kaalinta afraad ah, iyadoo Celtic oo Scotland ah ay shanta kooxood ee ugu guulaha badan soo xidhay oo ay 106 koob ku guuleysatay intii ay dhisnayd.
Barcelona iyo Real Madrid ayaa noqday labada kooxood ee ugu guulaha badan kooxaha waaweyn, waxaana Barca oo sannadihii ugu dambeeyey ahayd kooxda Spain ugu guulaha badan ay haystaa 91 koob halka ay Real Madrid 90 haysato.
Manchester United, Bayern Munich, Juventus iyo Liverpool ayaa ku kala jira kaalmaha 10aad, 13aad, 15aad iyo 17aad sida ay magacyadoodu u kala horreeyaan, halka AC Milan ay 25aad kaga jirto liiska.
Halkan kaga bogo kooxaha ugu guulaha badan dhinaca koobabka adduunka iyo naadi walba inta koob ee uu haysto
11. Al-Faisaly, Jordan (74)
12. Porto, Portugal (74)
13. Ajax, Netherlands (70)
14.Bayern Munich, Germany (70)
17.Anderlecht, Belgium (60)
18. Liverpool, England (60)
21 .Boca Juniors, Argentina (55)
22.Colo-Colo, Chile (54)
23.Zamalek, Egypt (52)
24.Grasshoppers, Switzerland (59)
26.CSKA Sofia, Bulgaria (48)
27.Milan, Italy (48)
30.Fenerbahce, Turkey (43)
Premier Legaue Oo Soo Saaray Natiijadii Ugu Dambeeyay koronaha Ee Kooxaha Premier League